"Hadduu isagu dunidan kaga tagay Covid-19 dartiis, waxay ina xasuusisay xaqiiqda masiibada" - TELES RELAY
"Hadduu isagu dunidan kaga tagay Covid-19 dartiis, waxay ina xasuusisay xaqiiqda masiibada"
By TELES RELAY On May 17, 2020
Michèle Ndoki waxay ku casuumaysaa saaxiibadeed MRC inay isbuuniso…
Mali: Soumaïla Cissé waxaa loola dhaqmay si xushmad leh sida uu qabo Amadou…
Liibiya: Tripoli waxay ku dhawaaqday inay dib u bilaabeyso saldhig hawleed istaraatiijiyadeed…
Murashaxa madaxweynenimada ee Oktoobar 2018 wuxuu hubkiisa bidix u gudbiyay Sabtida, May 16, 2020 gurigiisa oo ku yaal degmada Bonabéri ee Douala. Saaxiibadiisa siyaasadeed sida Me Akera Muna ayaa amaaney.
Me Akere Muna (c) Xuquuqda oo dhami way leedahay
Ninka Ilaah ma jiro. Hogaamiyaha wasaarada caalamiga ah ee Boqortooyada ayaa dhintay, laakiin sababaha uu u tagay wali lama cadeyn. In kasta oo warkii ugu horreeyay uu ku dhawaaqay caadi caado, qabuuro deg deg ah oo uu xaq u siinayo qabuuraha Kotto Bass ee Bonabéri waa tii qof dhintay oo ka timid cawaaqib xumada Coronavirus cusub. Abaalmarintiina wuxuu siiyay madaxweynaha dhaqdhaqaaqa Hadda sidoo kale waxay cadeyneysaa la'aanta cadeyn ku saabsan duruufaha geeridiisa.
Wadaad Franklin Ndifor Afanwi - Bidix goor hore. Nin diinta aad u weyn. Tani waxay ku hagtay soo gelitaankiisii ​​siyaasadeed. Hadduu isagu dunidan kaga tagay COVID19 awgeed, waxaa hubaal ah inay ina xasuusinayso xaqiiqada masiibadaas. In naftiisu nabad ku jirto ", Akere Muna ayaa ku soo qortay barteeda Twitter.
Meesha uu ka saaray qareenka, siyaasiyiin kale sida Serge Espor Matomba iyo Cabral Libii ayaa xasuustay qofka dhintay.
Waxaan ka bartay murugo qoto dheer oo ku saabsan geerida Franklin Ndifor Afanwi, oo horey u ahaa musharrax u tartamida doorashada madaxtinimada ee 2018. In naftiisu nabad ku jirto ", waxaa daabacay kuxigeenka PCRN. Hortiis, hogaamiyaha PURS wuxuu qoray,
Waxay ahayd murugo aad u weyn inaan wax ka bartay daqiiqado yar ka hor dhimashadii wadaadka Franklin Afanwi Ndifor, oo ahaa musharrax u tartamida doorashadii ugu dambeysay ee dalka Cameroon. Waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa dhammaan qoyskiisa iyo kuwa jecelba. The the the the the land land the the land the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the Dhulkii awowayaasheen ha ahaado iftiin, Oo naftiisuna nabad ha ku jirto.
Horeba waa loo diiwaangeliyay in kabadan 6000!
Ku hel maalin kasta emayl,
warkii Hadalka Nabiga yaan la iloobin!
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lebledparle.com/fr/politique-cameroun/1113405-akere-muna-au-sujet-de-la-mort-de-ndifor-afanwi-s-il-a-quitte-ce-monde-a-cause-du-covid-19-c-est-pour-nous-rappele-la-realite-de-cette-pandemie
Boqoradda iyo qoyska Royal waxay ka heleen 'awoodooda u gaarka ah' howshan aan la fileynin
Kalluunka Cagaaran ee Cagaaran ee Bacriminta iyo Cunto-Cunista 'Peas Recipe' - New York Times
Michèle Ndoki waxay ku casuumaysaa saaxiibada ay ka mid yihiin MRC inay shukumaan tuwaalka ku dhegaan “qabashada…
Mali: Soumaïla Cissé waxaa loola dhaqmay si xushmad leh sida uu qabo Amadou Kolossi, duqa magaalada…
Liibiya: Tripoli waxay ku dhawaaqday inay dib ugu soo laabaneyso saldhig hawleed istiraatiiji ah gacanta gacanta Haftar…
Maurice Kamto wuxuu doonayaa inuu la kulmo Mbarga Nguélé iyo gudoomiyaha xarunta gobolka